जति पैसा कमाएपनि यस्ता व्यक्तिका हातमा पैसा फिटिक्कै टिक्दैन ! हेर्नुहोस कतै तपाईं त पर्नु भयन ? | Rochak
June 3, 2021 NepstokLeaveaComment on जति पैसा कमाएपनि यस्ता व्यक्तिका हातमा पैसा फिटिक्कै टिक्दैन ! हेर्नुहोस कतै तपाईं त पर्नु भयन ?
तपाईलाई पत्यार लाग्छ रु मानिसको हातमा भएको कोठीका कारण उसको हातमा कति पैसा रहन्छ र टिक्दैन भन्ने जान्न सकिन्छ । शरीरमा कोठीको निकै महत्वपूर्ण प्रभाव रहन्छ । तपाइँले जति पैसा कमाएपनि तपाइँका यी अंगमा कोठी छ भने हातमा पैसा टिक्दैन । करोडपती बन्दै,५ वर्षमा यि ४ राशि हेर्नुहोस् कतै तपाईंको राशि पर्‍यो कि…( भिडियो हेर्नुहोस्) भिडियो हेर्न 👇यहाँ थिच्नुहोस
समुन्द्र शास्त्रका अनुसार शरीरका विभिन्न भागमा हुने कोठीले फरक फरक फल दिन्छन् । तर कतिपय भागमा कोठी भएमा तपाइँसँग भएको पैसा खर्च हुने वा जाने हुन्छ । यी भागमा कोठी भएका ब्यक्तिको हातमा पैसा अडिन्नःबायाँ गालामा कोठी हुनु खर्चालु हुने लक्षण हो । यस्ता ब्यक्तिको हातमा पैसा परे पनि खर्च भैहाल्छ । बचत गर्न सक्दैनन् । .(कहाँ कसरी बेच्ने? बेच्ने तरिका सिक्नको लाई ?पुरानो नोट तुरुन्तै बेच्नको लागि 👇️यो 👇लिन्क खोल्नुहोस)
तल्लो ओंठमा कोठी छ भने धनको कमी हुन्छ । तर उपल्लो ओंठमा कोठी भएका ब्यक्ति भने कामुक हुने समन्द्र शास्त्रमा उल्लेख छ । बायाँ हत्केलामा कोठी हुनेहरु पनि खर्चालु हुन्छन् । यिनीहरुबाट पैसा बचत हुनु सम्भव छैन ।बायाँ खुट्टामा कोठी हुनु पनि पैसा नटिक्ने संकेत हो । यस्ता ब्यक्तिले पैसा बचाउन नसक्ने शास्त्रमा उल्लेख छ ।चोरी औंलामा कोठी छ भने यस्ता ब्यक्तिले जीवनमा धन अभाव भोग्छन् ।हत्केलामा वृहस्पति पर्वतमा कोठी छ भने यस्ता ब्यक्तिले पनि धन बचाउन सक्दैनन् । करोडपती बन्दै,५ वर्षमा यि ४ राशि हेर्नुहोस् कतै तपाईंको राशि पर्‍यो कि…( भिडियो हेर्नुहोस्) भिडियो हेर्न 👇यहाँ थिच्नुहोस
यिनीहरुलाई पैसा हात लागेपनि बचत हुँदैन । बायाँ आँखि भौंमा कोठी भएका ब्यक्ति पनि खर्चालु हुन्छन् । उनीहरुले विलासितामा पैसा खर्च गर्ने समुन्द्र शास्त्रमा उल्लेख छ । बायाँ आँखामा कोठी हुनु पनि रोगमा पैसा जाने संकेत हो । यस्ता ब्यक्तिको पैसा उपचारमा बढी खर्च हुन्छ। .(कहाँ कसरी बेच्ने? बेच्ने तरिका सिक्नको लाई ?पुरानो नोट तुरुन्तै बेच्नको लागि 👇️यो 👇लिन्क खोल्नुहोस)